Galmudug Oo Puntland Ku Eedaysay Duqayntii Gaalkacayo | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Galmudug Oo Puntland Ku Eedaysay Duqayntii Gaalkacayo
Published on September 28, 2016 by sdwo · No Comments
Cadaaddo (SDWO.com): Madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa ka hadlay dhacdadaasi weerarka duqaynta aha ee ay saaka subaxnimadii diyaaradaha Maraykanku ka gaysteen saldhig ay deganaayeen ciidaadda Galmudug oo ku yaalla magaaladda Gaalkacayo.
C/kariin Xuseen Guuleed, oo maanta warbaahinta kula hadlay magaaladda Cadaado ee xarunta ku meel gaadhka u ah maamulka galmudug, kadib markii uu ka soo laabtay safar uu muddo dalka dibadiisa ugu maqanaa ayaa maamulka Puntland waxa uu ku eedeeyay in ay iyagu weerarkaasi ku soo hagayeen.
Waxaanu nasiib darro ku tilmaamay in Puntland ay ciidamadda Galmudug ku sheegto in ay Al-shabaab yihiin, isagoo xusay in
Galmudug iyo Al-shabaab uu dagaal ka dhexeeyo.
Madaxweynaha Galmudug, waxa uu sheegay in dagaal uu ka dhexeeyo Galmudug iyo Al-shabaab, isla markaana ay u arkaan cadwogoodda koowaad, sidaas darteed-na aanay jirin sabab ciidamadoodda loogu sheegi karo Shabaab.
Waxaanu yidhi “Waxaanu aad uga xunahay in masuuliyiinta kala duwan ee Puntland maalin walba marka ay hadlaan Galmudug, ciidankeedda iyo dadkeedda ay ku sheegaan in ay yihiin Al-shabaab. Galmudug iyo Shabaab, waa la yaqaanaa waxay isku yihiin oo ah in meel kastoo aanu isku aragno uu dagaal naga dhexeeyo waa la og yahay. Cadowga keliya ee aanu leenahay-na waxaanu u aragnaa in ay yihiin Al-shabaab.
Dhnaca kale madaxweynaha Galmudug, waxa uu tilmaamay in iyagu ay Puntland u arkaan dad walaalahood ah oo ay deris yihiin, sidoo kale-na ay Puntland ka rabaan in iyag-na ay sidaas u arkaan.
“Anagu Putlnad uma aragno in ay cadowgayaga tahay, balse waxaanu u aragnaa in ay deriskayaga iyo walaalahayo tahay. Iyagana (Puntalnd) waxaan ka rabnaa sidaa si la mid ah in ay noo arkaan, deriskooda iyo walaalahood in aanu nahay” ayuu yidhi C/kariin Xuseen Guuleed.
Sidoo kale C/kariin Xuseen Guuleed, waxa uu tacsi u diray eheladda askartii duqayntaasi ku geeriyootay, isagoo xusay in ay aad uga xun yihiin dhacdadaasi.
Waxaanu yidhi “Waxaan ka tacsiyadaynyaa eheladda dadkii ku geeriyooday dhibaatadii maanta ka dhacday Gaalkacyo, oo ahayd runtii dhibaato aad iyo aad u fool-xun, oo dhibaato aan dhamaanteen ka wada naxnay ahayd, aad iyo aad-na waan uga xumahay.
Dadkii ku dhintay-na waan u tacsiyadaynayaa eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen, aad iyo aad ayaananu uga xunahay dhacdadaasi haddii aanu nahay maamulka Galmudug”.